शेयर लगानीकर्ताले तिरेको पुँजीगत लाभ प्यानमा देखिएन, तपाईको के छ ? –
शेयर लगानीकर्ताले तिरेको पुँजीगत लाभ प्यानमा देखिएन, तपाईको के छ ?
काठमाडौं- सरकारले वैशाख यता ५ लाख रुपैयाँभन्दा माथिको शेयर कारोबार गर्दा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अनिवार्य गरेको भए पनि अहिलेसम्म कुनै पनि लगानीकर्ताले तिरेको लाभकर प्रणालीमा देखिएको छैन।
आन्तरिक राजस्व विभाग, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र सिडिएस एन्ड क्लिएरिङको बीचमा समन्वय हुन नसक्दा अहिलेसम्म पनि लगानीकर्ताहरुले आफूले तिरेको कर प्यानमा नदेखिएको हो। सम्पूर्ण लगानीकर्ताहरु प्यानमा नजोडिँदा प्यानमा देखाउन गाह्रो परेको सिडिएसीका सूचना तथा प्रविधि शाखाका प्रमुख सुरेश न्यौपानेले बताए।
प्रणालीमा ५ लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबार गर्नेहरुका लागि मात्रै प्यान अनिवार्य गरिएको हुँदा अहिलेको प्रणालीमार्फत लगानीकर्ताहरुले भुक्तानी गरेको लाभकर प्यानमा नदेखिएको उनले बताए। यसका लागि नेप्से र आन्तरिक राजस्व विभागसँग छलफल भइरहेको सिडिएससीका न्यौपानेले जानकारी दिए।
हाल डिम्याट खाताको संख्या १६ लाख १३ हजार वटा छ। तर सम्पूर्ण डिम्याट खातामा प्यान नम्बर प्रविष्ट भएको छैन। यदि डिम्याट खातामा प्यान नम्बर अनिवार्य गरिएको भए कुनै पनि समस्या नहुने सिडिएससीको तर्क छ।
लगानीकर्ताहरुले चर्को विरोध गरेपछि नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज पछाडि हटेको थियो। जसले गर्दा थोरै लगानीकर्ताको मात्रै प्यान नम्बर प्रणालीमा छ। सरकारले गत वैशाख एक गतेदेखि सम्पुर्ण लगानीकर्ताहरुकै लागि प्यान अनिवार्य गरे पनि लगानीकर्ताको चर्को विरोध पछि पछाडि हेटेको थियो।
प्यान नम्बर दिएका लगानीकर्ताहरुले कम्पतिमा पनि आफूले राज्यलाई कति कर तिरिरहेको छु भन्ने जानकारी पाउनु पर्ने ब्रोकर एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष प्रियराज रेग्मीले बताए। सरकारले प्यान अनिवार्य गर्ने तर कार्यान्वयनमा चाँहि नआउने भए यसको औचित्य नहुने उनले तर्क व्यक्त गरे।
यदि लगानीकर्ताले मैले कति कर तिरे भन्दै जानकारी माग्न आएमा सिडिएससीले दिने न्यौपानेले जानकारी दिए। अहिलेको अवस्थामा एक एक छानेर भुक्तानी भएको लाभ आन्तिरिक राजस्वमा पठाउन कठिन भएको हो। अहिले सबैलाई प्यान अनिवार्य गरिनुपर्ने या नयाँ प्रणालीको विकास गरेपछि मात्रै प्यानमा देखिन सक्ने सिडिएससीले जनाएको छ।
« रौतहटमा प्रहरी र भूमिगत समूहबीच गोली हानाहान
मध्यरातमा प्रहरीले गोली चलायो, ३२ किलो गाँजासहित तीन भारतीय पक्राउ »